Uphrojusa ukhala ngokushaywa indiva ngoweKwaito | News24
Uphrojusa ukhala ngokushaywa indiva ngoweKwaito
Durban – Uphrojusa ukhala ngomculi weKwaito uL'vovo Derrango osemshaye indiva ngemuva kokumkhiqizela izingoma ezingaphezulu kwengxenye kwi-albhamu yakhe esihloko esithi The Boss.
Ngokubika kweDaily Sun uDerrango ogamalakhe langempela nguThokozani Ndlovu ngale albhamu uhlabane ngendondo yamaMetro FM emkhakheni weBest Kwaito kanti yona le bhamu isanda kuqokwa futhi emkhakheni ofanayo kumaSouth African Music Awards.
Ngokusho komthombo waleli phephandaba uGoodman “Guetta” Khumalo ukhala ngokuthi uLvovo uqhakambisa uTira noCleo ngomsebenzi wakhe.
Umthombo uthe uDerrango akamubali nokumbala loGuetta kubantu asebenze nabo kule albhamu ebinezingoma ebezihlanyisa abantu ngoDisemba.
OLUNYE UDABA: Buka uL'vovo ezivocavoca - Ivideo
“UGoodman nguyena owakhiqiza izingoma cishe zonke ezikwile albhamu kodwa akakaze anuke ngisho indibilishi ngomsebenzi wakhe kunalokho kubalwa kakhulu uTira noCleo.
Nakuba ephatheke kabi ngesenzo sikaLvovo kodwa akafuni ukukhombisa ngoba usancenge ukuthi lo mculi amsayine ngaphansi kwenkampani yakhe iDerrango Records,” kusho umthombo.
Ethintwa uGoodman uthe wenze cishe u-70% we-albhamu yalo mculi.
“Isivumelwano besithi uzokhipha ingoma yami kulo nyaka ngaphansi kwenkampani yakhe kodwa akukho ebesikubhale phansi.”
Akafunanga ukuqhubeka nokuphendula imibuzo yaleli phephandaba njengoba ecele ukubuye athintwe.
ULvovo usole uGoodman ngokuhluleka ukuziphatha ngendlela efanele.
“Usephoxe umoya wami njengoba bengisajabulela ukuqokwa kumaSama,” kusho uLvovo.